Isu-soo-ururinta Macluumaadka Shaqsiga-Aqoonsiga
Xidhiidhka Shabakadaha Internetka ee Aan Shaqeyn Karin
Bogga waxaa ku jiri kara xiriirada bogagga kale ama goobaha kale kuwaas oo laga yaabo in ay maamusho NYECOUNTDOWN, LLC ama xubnihiisa, iyo kuwo kale oo ay ku shaqeeyaan dhinac saddexaad. Xidhiidhyadani waa uun kuugu sahlanaantaada. Kama aynaan dib u eegin macluumaadka ku saabsan goobaha kale. Mas'uuliyad kama saarno mawduucyada boggaga kale ama badeecooyin ama adeegyo laga yaabo in lagu bixiyo goobo kale. Sidaa darteed, waa in aad taxadar u yeelatid markaad isticmaasho websaydh kale, sida aad sidaas u samayso khatartaada. NYECOUNTDOWN, LLC waxay kugu dhiirigelineysaa inaad dib u eegto siyaasadda asturnaanta ee shabakad kasta oo kasta kahor intaanad gudbin macluumaadka shakhsiyeed.
NYECOUNTDOWN, LLC waxay isticmaashaa PayPal, Inc. iyada oo bixisa adeeg bixiyaha adeegga creditka saddexaad. NYECOUNTDOWN, LLC ma kaydiso wakhti kasta, macluumaad kasta oo deynta ah si aad u iibsato ama u sii wadato adeegga rukunka Adeeggiisa. Sidan oo kale, NYECOUNTDOWN, LLC ayaa ka masuul ah dhammaan masuuliyada macluumaadka deynta.
Tirakoobyada la ururiyey
NYECOUNTDOWN, LLC waxay isticmaashaa Google Analytics si ay u hesho macluumaadka magac la'aanta ah ee saldhigeeda isticmaalkeeda waxaana laga yaabaa inay ururiso tirakoob ku saabsan dabeecadaha booqdayaasha boggeeda internetka. NYECOUNTDOWN, LLC ayaa laga yaabaa inay si cad u soo bandhigto macluumaadkan ama siiso dadka kale. Si kastaba ha noqotee, NYECOUNTDOWN, LLC ma sheegin macluumaadka shakhsiyadeed ee aqoonsiga aan ahayn sida lagu sharxay hoos.
Ilaalinta Qaar ka mid ah Shaqsiga Aqoonsiga Macluumaadka
NYECOUNTDOWN, LLC waxa ay shaaca ka qaadeysaa macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aqoonsashada iyo shakhsiyaadka aqoonsiga oo keliya oo keliya shaqaalaha, qandaraaslayaasha iyo ururrada la socda:
Kukiyada iyo Ha La Yaaban Codsiyada
Haddii NYECOUNTDOWN, LLC, ama dhamaan hantidooda oo dhan, la helay, ama dhacdo aan la filaynin in NYECOUNTDOWN, LLC ka baxdo ganacsiga ama soo galootiga, macluumaadka macmiilku wuxuu noqonayaa mid ka mid ah hantida lagu wareejiyo ama uu helo dhinac saddexaad. Waxaad qiraysaa in wareejinta noocaas ahi dhici karto, iyo in qof kasta oo iibsadey NYECOUNTDOWN, LLC uu sii wadi karo inuu isticmaalo macluumaadkaaga shakhsiyeed sida ku cad siyaasaddan.
Xayeysiisyada ka muuqda mid kasta oo ka mid ah boggayaga internetka ayaa laga yaabaa in loo gudbiyo dadka isticmaala xayeysiiska xayeysiiska, kuwaas oo laga yaabo inay sameeyaan cookies. Kukiyadaas waxay u oggolaanayaan server-yada inay u aqoonsadaan kombuyuutarka mar kasta oo ay kuu soo diraan xayeesiin online ah si ay u ururiyaan macluumaadka ku saabsan adiga ama kuwa kale ee isticmaala kombuyuutarkaaga. Macluumaadkani wuxuu u ogolaanayaa shabakadaha xayeysiiska, waxyaabo kale, in la keeno xayaysiisyo bartilmaameed ah oo ay rumaysan yihiin inay aad u daneynayaan. Nidaamkan Qarsoodiga ah wuxuu daboolayaa isticmaalka cookies by NYECOUNTDOWN, LLC iyo ma daboolin isticmaalka cookies by xayeysiiye kasta.
Diidmada iyo Xaddidaadda Mas'uuliyadda
Sharciga Maamulka iyo Meel Gaar ah
Tirinta Codadka (16)
Qoob ka ciyaarka (7)
Dj Doomaha (Bundled Paks) (6)
Hotel / makhaayad (1)
Dib u celinta (2)
Laatiin Qiiro (6)
Dheeraadka Video-ka (21)
HEERKA PLATINUM HEERKA (2)